90 ဒီဂရီ (သို့) L ပုံသဏ္ledာန် ဦး ဆောင်သောညာဘက်ထောင့်မြင်ကွင်းမျက်နှာပြင်ဗွီဒီယိုနံရံ panel က - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
90 ဒီဂရီ (သို့) L ပုံသဏ္ledာန် ဦး ဆောင်သောညာဘက်ထောင့်မြင်ကွင်းမျက်နှာပြင်ဗွီဒီယိုနံရံ panel က
အခြားရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္LEDာန်ဖြစ်သော LED cube ကဲ့သို့သော display နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဘောလုံး LED မျက်နှာပြင်, polygon LED မျက်နှာပြင်, တြိဂံ LED display ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများ, ညာဘက်ထောင့် LED မျက်နှာပြင်ရိုးရှင်းပါသည်.
LED ညာဘက်ထောင့် display ကိုလည်းညာဘက်ထောင့် LED screen ဒါမှမဟုတ် L Shape LED display ဒါမှမဟုတ်ထောင့်မှန်ထောင့် LED display လို့လည်းခေါ်တယ်, အဓိကအင်္ဂါရပ်ကတော့ 90 °ထောင့်ရှိတဲ့ LED display နှစ်ခုပါတဲ့ display တစ်ခုဟာ display တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်တယ်။ display တစ်ခုသည် horizontal မှာဖြစ်သည်။. LED ညာဘက်ထောင့်ပြသမှုသည်အဓိကအားဖြင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော LED display များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. အခြားရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္LEDာန်ဖြစ်သော LED cube ကဲ့သို့သော display နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဘောလုံး LED မျက်နှာပြင်, polygon LED မျက်နှာပြင်, တြိဂံ LED display ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများ, ညာဘက်ထောင့် LED မျက်နှာပြင်ရိုးရှင်းပါသည်.
Pixle အသံ: LED ညာဘက်ထောင့် Panel ကို pixel pitch P10mm ဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်, P8mm, P6.67mm, P5mm, P4mm, P3mm, P2.5mm, P2mm နှင့်ပိုပြီး.
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား: ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက် LED display ကို module တစ်ခု၏ pixel အစေးပေါ်မူတည်အဖြစ် LED display ကိုအရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
လျှောက်လွှာ: ညာဘက်ထောင့် LED ဗီဒီယိုနံရံများကိုအိမ်တွင်းပုံသေ LED display နှင့်ပြင်ပပုံသေ LED display များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်
ဗီရိုပစ္စည်း: စိတ်ကြိုက် LED display အများစုအတွက်, ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်ရန်ခိုင်မာသောသံမဏိပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်
LED Panel ကို: ၎င်းသည်တည်ငြိမ်သော Nationstar LED နှင့် MBI5124 ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးမောင်းနှင်မှု IC ကိုပြသထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ဖြစ်သည်, ယူနီဖောင်းအရောင်နှင့်အတူမြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု,
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: ယူနီတီသည်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ် LED power supply ဖြစ်သော MEANWELL ကိုရွေးချယ်သည်, LED display ကိုမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာစေရန် G-energy
P3.91 ငှားရမ်းရန်လွယ်ကူသောလွယ်ကူသောမိုးလုံလေလုံစင်မြင့်ရှိ DJ ဖျော်ဖြေပွဲသည်ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်ပြသရန်အတွက်ဖြစ်သည်
P3.91 LED Panel တွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသောငှားရမ်းမှုကြောင့် LED ဘောင်အတွင်း၌တပ်ဆင်ထားသည်
HD ကိုမိုးလုံလေလုံ P4.81 500×1000 လူသိရှင်ကြားငှားရမ်းခြင်းအဖြစ်အပျက်များအတွက်ပြသထားသောဗွီဒီယိုနံရံ
P3.91 ဦး ဆောင်သည်ဗီဒီယိုနံရံတွင်မိုးလုံလေလုံဖြစ်ရပ်ဇာတ်စင် smd2121 အငှားတီဗီထုတ်လွှင့်သည့် Kinglight led
SMD အရောင်အသွေးစုံလင်သောမိုးလုံလေလုံအမျိုးအစား P2.976 P3.9 စင်မြင့်ငှားရမ်းရန် LED ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်
P3.91 မိုးလုံလေလုံငှားရမ်း LED display ကို,P3.9 pixel ငှားရမ်းသော LED display LED LED screen video video wall
P2.976 ဦး ဆောင်သောမျက်နှာပြင် panel ကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဇာတ်စင်ဖျော်ဖြေပွဲ p2.97 p3.91 p4.81
P3.91 မြင့်မားသော resolution ကိုမိုးလုံလေလုံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဦး ဆောင် display ကိုဇာတ်စင်ဖြစ်ရပ်ပြပွဲများအတွက် display ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်